Hordhac: Liverpool vs Brentford - Reds Oo Kaalinta Labaad Imanaysa, Dersinka Xiddigaha Ee Ka Maqan & Shaxda Uu Klopp Ku Dagaallamayo - GOOL24.NET
Hordhac: Liverpool vs Brentford – Reds Oo Kaalinta Labaad Imanaysa, Dersinka Xiddigaha Ee Ka Maqan & Shaxda Uu Klopp Ku Dagaallamayo
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa kusoo laaban doonta kaalinta labaad ee horyaalka Premier League oo ay kala bixi doonto Chelsea, si ay usoo gaabiso farqiga hoggaanka ee Man City marka ay maanta garoonkeeda ku qaabbiso Brentford, taas oo ay kulankoodii hore ay barbarro 3-3 ah ku kala baxeen.
Liverpool ayaa u dagaallami doonta sidii ay u heli lahayd saddexda dhibcood kaddib barbarrihii lugta hore ee semi-finalka EFL Cup / Carabao Cup ee Khamiistii ay goolal la’aanta ku kala baxeen Arsenal, taas oo ay Khamiista toddobaadkan ku kala bixi doonaan Emirates Stadium.
Brentford ayaa kulankani uu u imanayaa iyadoo guul-darro weyn oo 4-1 ah kala soo kulantay Southampton oo si xun usoo garaacday toddobaadkii hore.
Jurgen Klopp ayaa ay indhaha oo dhan ku jeedayaan maanta, waxaana laga sugayaa inuu ka joojiyo Manchester City inay waqti horeba xaqiijisato hanashada horyaalka isla markaana uu soo yareeyo fartiga 14ka dhibcood ah ee hadda ay ka dambeeyaan.
Xaqiiqooyin muhiim ah oo ku saabsan kulankan
Liverpool ayaa markeedii ugu horreysay martigelin doonta Brentford tan iyo March 1989kii. Xilligaas, iskugu dambaysay waxa 4-0 ku baadisay Liverpool kulan ka tirsanaa wareegga siddeedda ee FA Cup. Kulan ka tirsan horyaalka oo ay Liverpool marti-geliso Bentford na waxa ugu dambaysay October 1984kii oo ay 1-0 ku badisay.
Brentford guul-darrooyin ayay la kulantay shantii jeer ee ugu dambaysay ee dhamaan tartamada ee ay Liverpool martida u noqotay, waxaana isu-geyn lagaga badiyey 12 gool iyo 1. Sannadkii 1937kii ayaa ugu dambaysay inay ku badiso Anfield ciyaar ku dhamaatay 4-3.
Kaddib lix ciyaarood oo isku-xigay oo ay badisay bilihii November iyo December, Liverpool ayay wax waliba isku-rogeen, waxaanay guulo la’aan yihiin saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey horyaalka oo ay laba barbarro galeen midna ay guul-darraysteen.
Ciyaarta: Liverpool vs Brentford
Liverpool ayaan haysanin saddexdeeda ciyaartoy ee muhiimka ah ee Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Naby Keita oo kaga maqan tartanka qaramada Afrika. Sidoo kale, waxa dhaawacyo kaga maqnaanaya Nat Phillips, Thiago Alcantara, Harvey Elliott iyo Divock Origi.
Jurgen Klopp ayaa isku-shaandhayn ku samayn doono ciyaartoydii uu kula dheelay Arsenal Khamiistii, waxaana uu kaydka u diri doonaa James Milner, isaga oo ku beddeli doona Curtis Jones ama Alex Oxlade-Chamberlain.
Trent Alexander-Arnold ayaa sidoo kale si fiican u diyaarsan kaddib markii uu kasoo kabtay fayraska Korona, waxaana uu kusoo bilaaban doonaa difaaca midig iyadoo weerarkana ay Diogo Jota iyo Roberto Firmino ay iska garab ciyaari doonaan.
Brentford waxa ka maqan Frank Onyeka oo tartanka qaramada Afrika u baxay, halka Sergi Canos uu dhaawac kaga baxay kulankii Southampton.
Tababare Frank waxa kale oo ka maqan Josh Dasilva, David Raya, Charlie Goode iyo Mathias Jorgensen, balse warka niyad-samaanta ah ee ay helayaan ayaa ah inuu usoo noqday Rico Henry.